မှန်ကန်သော အသက်မွေးမှု ပြုနိုင်ပါစေ | The Noble Eightfold Path
မကောင်းသော အသက်မွေးမှု မိစ္ဆာအာဇီဝ မှ ရှောင်ကြဉ်မှုကို သမ္မာအာဇီဝ ဟု ဆို၏။
ကာယဒုစရိုက် များဖြင့်လည်း အသက်မမွေး၊ ၀စီဒုစရိုက် များဖြင့်လည်း အသက်မမွေး၊
ထို ဒုစရိုက်နှစ်မျိုးမှ လွတ်သော ကောင်းသော အသက်မွေးမှု့ကို သမ္မာအာဇီဝ ဟု ဆို၏။
ဤလောက၌ အသက်မွေးမှု့သည်များစွာရှိ၏။ အသက်မွေးမှု အာဇီဝသည်
မကောင်းသောအသက်မွေးမှုဖြစ်ပါက မိစ္ဆာအာဇီဝ ဖြစ်လာရ၏။
ကောင်းသော အသက်မွေးမှုဖြစ်ပါကသမ္မာအာဇီဝ ဖြစ်လာရ၏။
သို့ရာတွင် လူသည် မသေလိုမှုအတွက် အစာစားနိုင်ရန် ကောင်းသော
အသက်မွေးမှုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မကောင်းသော အသက်မွေးမှု့ပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်မွေးမှု့
တခုခုကိုတော့ လုပ်ရမည်ဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် အသက်မွေးမှုနှစ်မျိုးနှင့် ပတ်သက်၍
မြတ်စွာဘုရားက ဓမ္မပဒ ပါဠိတော် ၂၄၄ ၌ ဤသို့ ဟောကြားတော်မူထား၏။
သုဇိဝံ အဟိရိတေန၊ ကာကသူရေန ဓံသိနာ၊
ပစ္ဆန္ဒိနာ ပကမ္ဘေန၊ သံကိလိဌေန ဇီဝိတံ။
(ဓမ္မပဒ – ၂၄၄)
လူသည် တကယ်တမ်း လွယ်ကူစွာ အသက်မွေးမြူလိုပါက အရှက်မရှိရ၊
သူတစ်ပါး၏ သိက္ခာကိုလည်း ချရဲရ၏။
ညစ်ပတ်သော စိတ်လည်း ရှိရ၏။
ဤသို့ပြုလျှင် လောက၌ အသက်မွေးရ လွယ်လေ၏။
ဤဒေသနာတော် အရ လောက၌ လုပ်ကြံဇာတ်ကို သတိပဌာန် ဟူ၍လည်းကောင်း၊
၀ိပဿနာ အတုကို ဖန်တီး၍လည်းကောင်း၊ ဘုရားဟော မဟုတ်သော အဓမ္မများကို
အဟိရိက – အရှက်မရှိဘဲ လိုက်လံဟောပြောပို့ချနေသူများလည်း များစွာရှိတတ်ပါ၏။
ဟိတ်ဟန်ကောင်းကောင်း စကားလုံးထွားထွား မာယာများဖြင့် ဟန်ဆောင်လှည့်စားကာ
ကာကသူရ – ကျီးကန်းကဲ့သို့ လုရဲသော ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း များစွာရှိတတ်ပါ၏။
လောကအတွေ့အကြုံအရ မှားသောအသက်မွေးမှု့နှင့် မှန်သောအသက်မွေးမှု့
နှစ်မျိုးတို့တွင် မှားသော အသက်မွေးမှု့က လူမိုက်တို့၏ စရိုက်နှင့်
အမှန်ဟူသည်မှာ အဆန်သဘောဖြစ်သဖြင့် ပို၍ ခက်ခဲ၏။
အမှန်အားဖြင့် လူတို့သည် မိမိတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ အခြားသောလူများနှင့်
သက်ရှိသတ္တ၀ါများလည်း ရှိကြသေးရာ ယင်းတို့နှင့် မလွဲမရှောင်သာ ဆက်ဆံကြရ၏။
ထိုကဲ့သို့ ဆက်ဆံကြရာ၌ ငြိမ်းချမ်းစွာဆက်ဆံဖို့ လိုပါ၏။
ငြိမ်းချမ်းစွာ မဆက်ဆံနိုင်ပါလျှင် အမြဲတမ်းပူပန်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊
စိုးရိမ်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်းတို့ကို ခံစားနေရမည်ဖြစ်၏။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆက်ဆံနိုင်ဖို့
ဆိုသည်ကလည်း မိမိတို့ အနေဖြင့် မိမိတို့ဘက်မှ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာဖြူစင်မှဖြစ်၏။
မိမိတို့ဘက်မှ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ဖြူစင်မှလည်း အခြားသူတို့ဘက်က
ထိုအခါ လောက၌ ဒုစရိုက်များ ကင်းဝေးလာမည်ဖြစ်၏။
ဒုစရိုက်များ ကင်းဝေးလာသည်နှင့် အမျှ သုစရိုက်များ ထွန်းကားလာမည်ဖြစ်၏။
သုစရိုက်များ ထွန်းကားလာလျှင် လူတို့ တောင့်တကြသော
လွတ်လပ်မှု၊ မသေမှု၊ အားကိုးနိုင်မှုတို့ကို တဖြည်းဖြည်းချင်းရလာမည်ဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် စစ်မှန်သော လွတ်လပ်မှု (မောက္ခ)၊
စစ်မှန်သော မသေမှု(အမတ)၊ စစ်မှန်သော အားကိုးရာ (သရဏ) တို့ကို
ရလိုကြပါလျှင် မခိုင်မာသေးသော ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာတည်ဆောက်မှု သမာဒါန၀ိရတီ မှ
ခိုင်မာသော ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာ တည်ဆောက်မှု သမ္မတ္တ၀ိရတီ သို့ ရောက်အောင်
ခိုင်မာသော အဓိဌာန်ဖြင့် မဖြစ်မနေ ကြိုးပမ်းရပေမည်။
ဦးရွှေအောင်(အမြင်များပြောင်းလဲခြင်း) မှ ကိုးကား ရေးသားပါသည်
This entry was posted on October 26, 2011 by Noble Kyaw. It was filed under ဓမ္မအတွေး၊ဓမ္မအမေး .
အရက် ဆေးလိပ် စသဖြင့် ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံများတွင် အလုပ်လုပ်နေသော ဝန်ထမ်းများ၏ အသက်မွေးမူ့သည် ကောင်းသော အသက်မွေးမှု့ မည်ပါသလား?
၀န်းထမ်းအနေနဲ့ကတော့ ဘယ်ဝန်ကိုပဲထမ်းထမ်း ရိုးရိုးသားသား တာဝန်ကျေကျေနဲ့ လုပ်ခလစာယူပြီး အသက်မွေးတယ်ဆိုရင် ကောင်းတယ်လို့ မချီးမွမ်းနိုင်ရင်တောင်မှ ဆိုးတယ်လို့ မကဲ့ရဲ့သင့်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး ရှားပါးတဲ့ ကာလဒေသတွေမှာ ရရာဝန်ကို ထမ်းနေရတာဆိုရင် အပြစ်ဆိုဖို့ ခက်ပါတယ်။
ရွေးစရာ အလုပ်တွေပေါနေပြီး ၀န်ထမ်းသူ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အရက် ဆေးလိပ် စတာတွေနဲ့ လုံးဝကို မပတ်သက်ဘဲ အသက်မွေးတာ ဆိုရင်တော့ အထူးသဖြင့် ချီးကျူးသင့်ပါတယ်။
Note: facebook.com မှအရှင်အာစာရာ၏ ဖြေဆိုချက်ပါ….